Kutsvaga kwemhando yepamusoro zvigadzirwa zvesimbi
Kufambira mberi kwe stamping ndiyo inonyanya kushanda yekutsikisa mhinduro iyo inogona kuve nechokwadi chese kugadzirwa kuburitsa uye mhando.
Panogona kuve nemaseti akati wandei ezvitambi zvikamu zvinosanganiswa nezvikamu zvakasiyana mumhando dzakasiyana dzinogadzirwa kubva mukutsikirira kunofambira mberi.
Kwenguva yakareba, maitiro ekuongorora chikamu chemhando yave iri dambudziko rakakura, kusvika patinoshandisa tekinoroji yedu yekuona uye nekuisa CCD system kune inofambira mberi stamping.
Iyo sisitimu inosanganisa basa rekutarisa mhando inosanganisira yechikamu chimiro, dimension yekuongorora, chikamu chekutarisa chitarisiko.
Hazvina mhosva iwe uri kutsvaga die casting parts akagadzirwa kubva Alu, Zinc, kana Mg, tinogona kukupa yedu yemhando yepamusoro sevhisi ine bhajeti inonzwisisika.
Kune zvimwe zvikamu zvekukandira zvinoda sekondari kugadzirisa machining senge kuchera gomba, de-burring uye plating, tinogona kukupa iyo yekumira-imwe sevhisi. Iyi ndiyo yechinyakare kufa-casting mhinduro.
Kuchengetedza mutengo wekugadzira kufa, multi-slider die casting moldndiyo mhinduro yakanaka. Kune zvikamu kubva ku-multi-slider die casting mold, hapana basa rekuwedzera rekubvisa kana kupukuta pane imwe nzvimbo.
Aya matanho maviri anogona kukuchengetedza mahara kubva mumutengo wakakura webasa. Yese yekukanda kutenderera nguva inogona kupfupika kunge isingasviki 10seconds.
Pamwe chete isu tinowanzo kupa kugadzira de-gating yekucheka chishandiso + otomatiki mutsara, nenzira iyi iwe unogona kuseta de-gating nechishandiso chekucheka uye iyo otomatiki mutsara inenge isina zvachose isina manpower kuti iwe uwane zvikamu zvekupedzisira.
Investment casting ndiyo mhinduro yakanaka yeStainless simbi zvigadzirwa zvekukanda kugadzirwa, kune mienzaniso yezvikamu zvakagadzirwa kubva ku403SS uye 316SS, nezvimwe.
Iyi ndiyo yekare simbi yekukanda mhinduro yakagadzirwa kubva kukanda jecha. Iyo yese nzira yekugadzira yakarebesa uye inononoka.
Zvinowanzotora mwedzi nehafu kune rimwe batch rekugadzira. Mushure mekugadzira molds kubva kuAlu. kana kubva kusimbi, wakisi mold inodiwawo.
Kuipa kwemhinduro iyi ndeiyi: yakaderera kubuda munguva pfupi, inoda nguva yakareba kuti izadzise maitiro akazara; chikamu chechikamu chakanyanya kuderera mukushivirira tichienzanisa jekiseni repurasitiki uye kufa-kukanda nekuti kusvika parizvino kune akawanda maitiro achiri kuitwa nemaoko ane anorema kwazvo manpower anodiwa; mamwe maficha haagone kuumbwa uye anogona kungogadzirwa kubva kune yechipiri kugadzirisa sekugaya, kuchera kana kupukuta.
Kero:Honglaiya indasitiri nzvimbo, Shatou, Chang'an Town, Dongguang Guta, Guangdong, China.
© Copyright - 2021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.